Però : Fijerena Manokana Ny Hetsi-panoherana Manohitra ny Fitrandrahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2011 8:52 GMT
Ny herinandro lasa teo dia somary sarotsarotra ihany ho an'ny governemanta . Raha vao haingana izay ny Governemantan'i Ollanta Humala no nahatratra ny faha 100 androny, fifandonana ara-sosialy telo mihahenjana izay nifandraika tamin'ny olana ara-pitrandrahana : ny grevin'ireo mpamboly tao Andahuaylas izay mangataka ny fampiatoana ny ozinina fikirakirana firaka roa ary ny fanajanonana ny fifanarahana amin'ny asam-pitrandrahana ao amin'ny faritra ; ireo hetsi-panoherana tao Cajamarca manohitra ny tetikasam-pitrandrahana Conga satria farihy roampolo no mety ho foana tanteraka [es] noho io tetikasa io; sy ny fibahanana arabe[es] tao Huari ary Cátac, tao amin'ny faritra Avaratr'i Ancash , mba hangataka ny fampiharana ny lalàna mifehy ny tontolo iainana amin'ireo orinasam-pitrandrahana Antamina sy Huallanca.
Amin'ireo fifandonana maro ireo, ny fifandonana tao Andahuaylas no niitatra be indrindra : Taorian'ny tsy fahombiazan'ny fifanarahana niaraka tamin'ny vaomiera ambony dia nivadika fandorana trano maromaro sy maratra 38 ilay hetsi-panoherana noho ny fifandonana teo amin'ny mponina sy ny polisy. Nitranga izany rehetra izany raha mbola malaza amin'ny haino aman-jery ny raharaham-panindriana nataon'ny Filoha lefitra Omar Chehade [es] ary nitsidika firenena vahiny ny Filoha Humala.
Fa hafa noho izany kosa ny hevitra sy ny fomba fijery hita ao amin'ny tontolon'ny bilaogy. Ohatra, ao amin'ilay bilaogy Consulta Previa (“fifanankalozan-kevitra voalohany”) rehefa avy namakafaka [es] ilay hetsi-panoherana miompana amin'ny toky nomen'i Ollanta Humala, dia nidiran'izy ireo tany amin'ny fotony avy hatrany ny raharaha :
Ny tery amin'ny farany ambany dia ny hoe afaka ny hampandroso ve ny fitrandrahana aquifers. Ny valinteninay dia TSIA. Rehefa mazava ny momba izay, dia afaka ny hiresaka tsara amin'izay isika. Io fanombohana io no ampoizina fa hahalany vola be ireo mpampiasa vola. Kanefa tsy any amin'ny resaka faharitran'ny dobo sy ny tany mando na ny fandotoana ny dobo sy ny loharano ho antoka ho amin'ny fandrosoana ilay izy. Mazava ny amin'izany amin'izao tontolo izao. Fa nahoana kosa i Però no tsy afaka ny hihiaka ny fanavaozany amin'izany resaka izany ?
Tao amin'ilay bilaogy ¿Estamos jodidos?(“Moa va isika voabaiko?”) dny ahiahin-dry zareo [es] dia resaka momba ny fitrandrahana mihitsy, saingy miompana kokoa amin'ny vokatra notrandrahina ny fanadihadiana :
Kanefa tsy mandeha ila izany ahiahy izany, misy ihany koa izany ho an'ny governemanta[es] :
Ao anatin'izay ahiahy izay ihany, ao amin'ilay bilaogy Políticamente Incorrecto (“tsy ara-politika”), Víctor Roble dia nanakina [es] ny fihetsiky ny praiminisitra Salomón Lerner :
[in] Ny tantara vao haingana teo amin'ny orinasa Yanacocha-Newmont momba ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny fiarahamonina eo amin'ny resaka fandriampahalemana sy ny tontolo iainana no manazava ny zavamisy ankehitriny: izany hoe manana antony anoherana irey mpanohitra. Ilaina ny mampahatsiahy fa nanaiky tanteraka ny andraikiny ilay orinasa amin'ny vokatry ny [es] fiparitahan'ny merkiora tao Choropampa, ary nahazo alalana ” hanonitra ivelan'ny fitsarana” [es] ny orinasa nefa tsy mifanatsahana tamin'ny haben'ny loza izany. Eo amin'ny sehatry ny filaminana, ny fanadihadiana 2009 dia nampiharihary ny omba fanao tsy ara-dalàna sy tsy rariny nataon'ireo Mpitandro ny Filaminana an'olo-tsotra sy ny polisy izay karamain'ireo orinasa , indrindra ny tamin'izay nitranga tao Combayo. Raha nangataka hifampitafatafa mba hiresahana izay niova noho ny fanombanana sy ny zavatra tokony hotanterahina nivoaka aho tamin'ny 2010 dia nandà tsy hiresaka ny orinasa.
Mandritra izany fotoana izany mbola lavitry ny hivaha ny olana. Ao Andahuaylas ilay hetsi-panoherana [es] dia mbola mitohy [es] na dia eo aza ny faneken'ireo mpamboly ny hanajanona ny fitakiany, raha nisy loharano maro nilaza ny mety hisian'ny fanararaotana [es] ataon'ireo” vondrona efa tafiditry ny olona voakarama” [es]. Ny mponina ao Cajamarca dia mitory[es] ny filoham-paritra ho miantso ny grevy , raha toa ny orinasam-pitrandrahana Yanacocha dia manohy ny mandray fanakianana [es] mifandraika amin'ny tontolo iainana [es]. Mazava ho azy , tsy mora izany, araka ny aseho ao amin'ity lahatsary fanadihadiana ity [es] izay ahitana ny depiote Javier Diez mampiseho resaka maro mikasika ny olan'ny fitrandrahana.
sary Pasantía a Minera Yanacocha, avy aminà mpampiasa Flickr FeFe teo ambany fanomezan-dalàn'ny Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) license.
Lahatsoratra orizinaly navoaka tao amin'ny bilaogy Juan Arellano ny 14 Novambra 2011 [es].